कार्निवल क्रूज प्रीपेड Gratuities - TipWho
घर / सहायक सर्भर, स्वचालित Gratuities, केबिन उपस्थिति, कार्निवल क्रूज लाइन, परिभ्रमण, हेड सर्वर, भरियाहरू, प्रीपेड ग्रेच्युटीज, कोठा मा पाउने सुबिधा, सर्भर, Stateroom होस्ट / कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटीज
1 कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटीहरू: के मैले कार्निवल क्रूजमा ग्रुप्युटीहरू भुक्तान गर्नु पर्छ?
1.2 के तपाइँसँग कार्निवल क्रूजमा सुझाव छ?
1.3 कार्निवलको प्रीपेड ग्रेच्युटीहरू कति छन् र के ती कार्निवाल टाइपिंग रेटको समान चीज हुन्?
1.4 कार्पेवल क्रूजमा प्रिपेड ग्रेटिभिटीहरूले के कभर गर्दछ?
1.5 के प्रीपेड Gratuities कभर छैन?
1.6 कार्निवलमा तपाइँ कसरी आदान प्रदान गर्न अग्रिम हुनुहुन्छ?
1.7 के म एक कार्निवल क्रूजमा ग्रेच्युटीहरू भुक्तान गर्नु पर्छ?
1.7.1 भुक्तान नगर्नु पर्ने कारणहरू
1.7.2 भुक्तान गर्न कारणहरू
1.8 के यदि म कार्निवल क्रूज Gratuities भुक्तान छैन?
कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटीहरू: के मैले कार्निवल क्रूजमा ग्रुप्युटीहरू भुक्तान गर्नु पर्छ?
कार्निवल क्रूज बुकि While गर्दा, तपाईंलाई तपाईंको ग्रेच्युटी शुल्कहरू पूर्व-भुक्तानको विकल्प प्रस्ताव गरिन्छ। तपाईंले अब प्रि-भुक्तानी गर्नुपर्छ? वा तपाइँ एक पटक तपाइँको क्रूज जहाज मा टिप गर्नुपर्छ? प्रतीक्षा गर्नुहोस्, तपाइँले कार्निवल क्रूजमा टिप दिनुपर्नेछ? कार्निवल टिपिंग दर के हो? हामी यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौं र हाम्रो कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटी गाइडमा।
के तपाइँसँग कार्निवल क्रूजमा सुझाव छ?
हो, तपाईंले २ वर्ष र माथिका प्रत्येक यात्रीका लागि कार्निवल क्रूजमा टिप दिनुपर्नेछ। सुझावहरू क्रुज उद्योगमा सामान्य छन् र कार्निवल यसको अपवाद छैन। याद गर्नुहोस् कि क्रूज उद्योगले सुझावहरू 'ग्रेच्युटीहरू' बोलाउन मन पराउँछन् तर त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन, यो अझै पनि टिपको लागि एक फेन्सी नाम हो।
कार्निवलको प्रीपेड ग्रेच्युटीहरू कति छन् र के ती कार्निवाल टाइपिंग रेटको समान चीज हुन्?
कार्निवल टिपिंग दरहरू स्ट्यान्डर्ड स्ट्याटरूमका यात्रुहरूको लागि प्रति दिन १$.13.99 डलर र एक सुइट स्टैटरूममा यात्रुहरूको लागि प्रति दिन $ १ ..।। छ। २ बर्ष मुनिका यात्रीहरूलाई शुल्क लगाइदैन। किनकि यी ग्रेच्युटीहरू वैकल्पिक छैनन्, तपाईंले प्रति यात्री प्रति धेरै यति खर्च गर्न बजेट गर्नु पर्छ। आशा छ कि तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले यो भुक्तानी गर्नु पर्छ तर पहिलो पटक क्रूजरहरू प्रायः यी स्नीकी फीस द्वारा अचम्मित हुन्छन्।
कार्पेवल क्रूजमा प्रिपेड ग्रेटिभिटीहरूले के कभर गर्दछ?
प्रि-पेड ग्रेच्युटीहरू तपाईंको केबिन परिचर साथ साथै भोजन कक्ष र पाका स्टाफ द्वारा साझा गरिन्छ। तिनीहरू तपाईंको क्युरिज जहाजमा हुँदा तपाईंको ख्याल राख्ने व्यक्तिहरूको अधिकांश, तर सबै कुरा कभर छैन।
के प्रीपेड Gratuities कभर छैन?
दुर्भाग्यवश, कार्निवल क्रूज प्रीपेड ग्रेच्युटीजले टिप हुनु पर्दछ कि गर्ने सबै सदस्यहरूका लागि टिपहरू समेट्दैन।
यदि तपाईं कोठा सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई एउटा सानो टिप छोड्ने आशा गरिन्छ। त्यसो गर्न डलर बिलहरू ल्याउनुहोस् र प्रति कोठा सेवा डेलिभरी $ २ छोड्नुहोस्।
जब तपाईं क्रूज जहाजमा सक्नुहुनेछ र बन्द गर्नुहुनेछ, तपाईंको कार्निवल क्रूज भरियाहरूले तपाईंको सामानको हेरचाह गर्नेछन्। उनीहरूले सुझावहरूको पनि अपेक्षा गरिरहेका छन् जुन नगदमा पनि सल्लाह गर्नुपर्दछ। एक न्यूनतम टिप प्रति ब्याग bag १ हुनुपर्दछ, प्रति झोलामा $ २ अधिक सामान्य टिप हुनुपर्दछ।
प्रीपेड ग्रेच्युटीहरूले ग्रेच्युटी चार्जहरू कभर गर्दैनन् कि जब कि जब तपाईं बोर्डमा पेय पदार्थ पाउनुहुन्छ तपाईंले तिर्नु पर्छ। यदि तपाईंसँग पेय छ भने, एक १%% ग्रेच्युटी तपाईंको जहाजको सेल र खातामा शुल्क लगाइनेछ। यो सम्झन महत्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई स्वचालित रूपमा १%% चार्ज गरिएको छ, अन्यथा तपाईं डबल टिप सक्नुहुनेछ!
कार्निवलमा तपाइँ कसरी आदान प्रदान गर्न अग्रिम हुनुहुन्छ?
तपाइँ तपाइँको बुकिंगको समयमा वा कार्निवल मार्फत सिधै कुनै पनी सिभिंगको मिति सम्म ग्रेच्युटीहरू पूर्व भुगतान गर्न सक्नुहुन्छ।
के म एक कार्निवल क्रूजमा ग्रेच्युटीहरू भुक्तान गर्नु पर्छ?
सामान्यतया, तपाईले आफ्नो कार्निवल ग्रेच्युटीहरू प्रीपे गर्नु हुँदैन तर केहि केसहरू हुन्छन् जहाँ यो अर्थपूर्ण हुन्छ।
भुक्तान नगर्नु पर्ने कारणहरू
तपाईंको क्रूज धेरै महिना टाढा हुन सक्दछ तर ग्रेच्युटीहरूको पूर्वतयारीको अर्थ आज कार्निवललाई तपाईंको पैसा दिने हो। कार्निवल अहिले पैसा भएकोमा खुशी हुनेछ, तर तपाईंले कुनै सेवा प्राप्त गर्नु भएन। क्रूजमा हुँदा तपाईंको पैसा खर्च गर्नुहोस् तपाईंको ग्रेच्युटीहरू पूर्व-भुक्तान नगरी र यस बीचमा बचत गर्नुहोस् र केही ब्याज कमाउनुहोस्।
ग्रेच्युटीज महान सेवालाई प्रोत्साहित गर्नु हो। पूर्व भुगतान गरेर, तपाईं बोर्डमा प्राप्त वास्तविक सेवा र तपाईंले भुक्तान गर्नुभएको ग्रेच्युटी बीच कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसोभए यो तपाईंको क्रूजमा मामला हुन सक्दछ कि ठूलो सेवा इशारा दिइन्छ जबकि गरीब सेवालाई पुरस्कृत गरिन्छ। यो तपाईको हुन चाहानु हुने कुराको विपरित हो।
भुक्तान गर्न कारणहरू
व्यक्ति प्रीपे गर्न सक्ने एक कारण यो हो कि यसले तपाईंको जीवनलाई सरल बनाउँछ। बुकिंगको समयमा एक भुक्तानले सबै थोक ढाक्छ। यदि तपाईं आफ्नो ग्रेच्युटीहरू पूर्व-भुक्तानी गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अब उपदानको चिन्ता लिनुपर्दैन।
प्रीपे गर्नका लागि अर्को कारण यो हो यदि तपाईं क्रुजलाई प्रियजनलाई गिफ्ट गरिरहनु भएको छ र उनीहरूले ग्र्याच्युटीको लागि आफैं भुक्तान गरेको चाहनुहुन्न। यस अवस्थामा, यसले उनीहरूका लागि ग्र्याच्युइटीहरू भुक्तानी गर्न अर्थ राख्दछ (र एक महान उपहार हो)।
जबकि यो तपाइँलाई लागू हुँदैन, यदि तपाइँ क्रूज लिइरहनुभएको छ जहाँ तपाईले आफ्नो आय आर्जित गरेको भन्दा भिन्न मुद्रामा ग्र्याच्युइटीहरू तिर्ने गरिन्छ, त्यहाँ पूर्वभुक्तानीको थप लाभ हुन सक्छ। यस अवस्थामा, प्रीपेयिंगले तपाईंलाई विनिमय दरमा लक गर्न अनुमति दिन्छ, एक अनिश्चित भविष्यसँग सम्झौताको भन्दा। विनिमय दरहरू स्थिर हुँदैनन् र तपाईंको पक्षमा वा बाहिर - केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ।
के यदि म कार्निवल क्रूज Gratuities भुक्तान छैन?
यदि तपाइँ तपाइँको ग्र्याच्युटीहरू भुक्तान नगर्ने छनौट गर्नुहुन्छ भने, ती स्वचालित रूपमा तपाइँको जहाजको सेल र साइन खातामा थपिनेछन्। यो खाता हो जुन तपाइँको डु card्गा छोड्नु अघि तपाइँको क्रेडिट कार्डबाट सिधै भुक्तान गरिनेछ। यदि तपाईं उपदान परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईको खातामा स्वचालित रूपमा शुल्क लगाइएको थियो भने तपाई पाहुना सेवा डेस्कमा चालक दलका सदस्यसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। चालक दलका सदस्यले तपाईलाई विशेष गरी राम्रो व्यवहार गरेको इनाम दिनका लागि तपाईले यी रकमहरू परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईंलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने क्रू मेम्बरको ग्रेच्युटी रेट घटाउन सक्नुहुन्छ।
स्वचालित Gratuitiesस्वचालित टिपिंगकेबिन उपस्थितिकार्निवल क्रूज लाइन्सकार्निवल क्रूजक्रूज ग्रेच्युटीजcruisesपाक स्टाफभोजन स्टाफप्रीपेड ग्रेच्युटीजप्रिपेड सुझावहरूकोठा मा पाउने सुबिधासाइन र सेल सहायक सर्भरस्वचालित Gratuitiesकेबिन उपस्थितिकार्निवल क्रूज लाइनपरिभ्रमणहेड सर्वरभरियाहरूप्रीपेड ग्रेच्युटीजकोठा मा पाउने सुबिधासर्भरStateroom होस्ट